Activities of State and Regional Health Departments
1. Kachin State (332)
Latest activities : ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းမြို့နယ်တွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေး (Mask & Face Shield Campaign) နှင့် ပြုမူပြောင်းလဲဆက်သွယ်ပညာပေး လူထုလှုပ်ရှားမှုကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်
Last Update on 24 Jan 2021
2. Kayah State (190)
Latest activities : ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့တွင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာနှင့် သတိတရားမြှင့်တင်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှု (Yellow Campaign) ဆောင်ရွက်
Last Update on 29 Jan 2021
3. Kayin State (55)
Latest activities : ဘားအံမြို့နယ်တွင် World AIDS Day အကြိုအဖြစ် Mask Campaign လှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်
Last Update on 29 Nov 2020
4. Chin State (238)
Latest activities : ချင်းပြည်နယ်၌ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပြုမူပြောင်းလဲရေးဆက်သွယ်ပညာပေး လူထုလှုပ်ရှားမှုစီမံချက် (Mask and Face Shield Campaign) ကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက်
Last Update on 03 Dec 2020
5. Sagaing Region (578)
Latest activities : စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းတော်၊ ခန္တီးနှင့် ဘုတလင်မြို့နယ်များတွင် (Mask Campaign) ဆောင်ရွက်ခြင်း (8-7-2021)
Last Update on 08 Jul 2021
6. Tanintharyi Region (167)
Latest activities : တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပြုမူပြောင်းလဲရေးဆက်သွယ်ပညာပေး လူထုလှုပ်ရှားမှုစီမံချက် (Mask and Face Shield Campaign) ကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်
7. Bago Region (331)
Latest activities : ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း (၈၀၀၀) ဦးခန့်အား COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး စတင်ထိုးနှံ
Last Update on 27 Jan 2021
8. Magway Region (221)
Latest activities : မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်အားလုံးတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပြုမူပြောင်းလဲရေးဆက်သွယ်ပညာပေး လူထုလှုပ်ရှားမှုစီမံချက် (Mask and Face Shield Campaign) ကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်
Last Update on 19 Nov 2020
9. Mandalay Region (1147)
Latest activities : မန္တလေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးရှိ ကာကွယ်ဆေးထိုးစုရပ်သို့ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုအားပေးမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
Last Update on 30 Jan 2021
10. Mon State (171)
Latest activities : မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဈေးများတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပြုမူပြောင်းလဲဆက်သွယ်ပညာပေးလူထုလှုပ်ရှားမှုများ (Mask & Face Shield Campaign) ကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက်
Last Update on 18 Nov 2020
11. Rakhine State (647)
Latest activities : ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့နယ်တွင် (Mask Campaign) ဆောင်ရွက်ခြင်း (10-7-2021)
Last Update on 10 Jul 2021
12. Yangon Region (2164)
Latest activities : မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေး စတင်ထိုးနှံခြင်း
13. Ayeyarwady Region (372)
Latest activities : ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဈေးများတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပြုမူပြောင်းလဲဆက်သွယ်ပညာပေးလူထုလှုပ်ရှားမှုများ (Mask & Face Shield Campaign) ကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက်
Last Update on 17 Nov 2020
14. Shan (South) State (542)
Latest activities : ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်တွင် (Mask Campaign) ဆောင်ရွက်ခြင်း (10-7-2021)
15. Shan (North) State (42)
Latest activities : ဖောင်ကြီး Covid 19 ကုသရေးဌာနသို့ သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော သူနာပြုဆရာမများအား ကြိုဆိုပွဲနှင့်အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ
16. Shan (East) State (151)
Latest activities : ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ ပြည်နယ်ကုသရေးနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ ကျိုင်းတုံမြို့ ပြည်နယ်အဆင့် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ
Last Update on 22 Jan 2021
17. Nay Pyi Taw Union Territory (93)
Latest activities : နေပြည်တော်တွင် ပါးစပ်နှာခေါင်းစည်း တပ်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်
Last Update on 05 Dec 2020
Activities of Kachin State
Kachin State (332)
Activities of Kayin State
Kayin State (55)
ဘားအံမြို့နယ်၊ သာမညဒေသတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်း အရှိန်အဟုန်မြှင့် လုပ်ဆောင်
လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်၊ မြိုင်ကြီးငူဒေသတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်း အရှိန်အဟုန်မြှင့် လုပ်ဆောင်
Activities of Sagaing Region
Sagaing Region (578)
Activities of Bago Region
Bago Region (331)
Activities of Mandalay Region
Mandalay Region (1147)
Activities of Rakhine State
Rakhine State (647)
Activities of Shan (South) State
Shan (South) State (542)
ပင်းတယမြို့နယ်တွင် ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နှင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်
Activities of Shan (East) State
Shan (East) State (151)
ကျိုင်းတုံမြို့တွင် ပြည်နယ်အဆင့် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေး ကျင်းပ
Activities of Nay Pyi Taw Union Territory
Nay Pyi Taw Union Territory (93)
Activities of Kayah State
Kayah State (190)
Activities of Chin State
Chin State (238)
Activities of Tanintharyi Region
Tanintharyi Region (167)
Activities of Magway Region
Magway Region (221)
Activities of Mon State
Mon State (171)
Activities of Yangon Region
Yangon Region (2164)
Activities of Shan (North) State
Shan (North) State (42)
Activities of Ayeyarwady Region
Ayeyarwady Region (372)